Guddigii uu soo magacaabay Qoor Qoor oo ka mid noqday xubnaha tababarka loo xareeye – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Guddigii uu soo magacaabay Qoor Qoor oo ka mid noqday xubnaha tababarka loo xareeye
Warar ay heshay Idaacadda Kulmiye ayaa sheegaya in xubnaha guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee metelaya Galmudug lagu daray xubnihii maanta loo xareeyey tababarka la xariira doorashada dalka.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xareysay guddiyada doorashada heer dowlad goboleed oo weli kala dhiman, kuwaas oo la dejiyey Hotelka Peace oo ku yaalla meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ilo ku dhow dhow xubno ka tirsan guddiga doorashada Galmudug ee lagu muransan yahay ayaa KNN u sheegay in Madaxweyne Qoor Qoor uu xalay ku soo wargeliyay inay Arbacada maanta ah tababar u xaroodaan.
Shalay ayaa xubnaha guddiyada lagu muransanyahay ee heer dowlad goboleed kuwooda laga soo magacaabay HirShabelle iyo Koonfur Galbeed, waxaa lagu xareeyey hotel Peace, iyadoo Madaxweyne Qoor Qoor uu dalbaday in dib loo dhigo xareynta xubnihii uu soo magacaabay.
Tallaabada uu haatan Madaxweyne Axmed Qoor Qoor ku go’aansaday in la xareeyo guddigii doorashada ayaa meesha ka saareysa dhex dhexaadintii uu ka dhex waday Midowga Musharaxiinta mucaradka ah iyo Madaxweyne Farmaajo.
Previous Midowga mushariinta oo war ka soo saaray xaaladihii u dambeeyey ee dalka
Next Cumar Finish oo mar kale u Hanjabaad u diray Musharaxiinta una sheegay inaan.
Magacaabista Safiirrada iyo Ololaha Doorashada (Warbixin) January 15, 2021
Jadwalkii labaad ee Guddiga doorashada lagu marsan yahay oo fashilmay January 14, 2021
Shirka golaha wasiirada oo la sheegay in la baajiyay. January 14, 2021
Archives Select Month January 2021 (59) December 2020 (107) November 2020 (113) October 2020 (86) September 2020 (138) August 2020 (124) July 2020 (136) June 2020 (123) May 2020 (83) April 2020 (104) March 2020 (177) February 2020 (160) January 2020 (163) December 2019 (165) November 2019 (168) October 2019 (138) September 2019 (152) August 2019 (166) July 2019 (166) June 2019 (162) May 2019 (158) April 2019 (114) March 2019 (128) February 2019 (95) January 2019 (148) December 2018 (129) November 2018 (99) October 2018 (104) September 2018 (98) August 2018 (98) July 2018 (93) June 2018 (130) May 2018 (124) April 2018 (97) March 2018 (140) February 2018 (93) January 2018 (131) December 2017 (113) November 2017 (95) October 2017 (84) September 2017 (98) August 2017 (121) July 2017 (120) June 2017 (94) May 2017 (119) April 2017 (112) March 2017 (117) February 2017 (139) January 2017 (118) December 2016 (89) November 2016 (114) October 2016 (98) September 2016 (91) August 2016 (95) July 2016 (91) June 2016 (73) May 2016 (68) April 2016 (55) March 2016 (100) February 2016 (67) January 2016 (71) December 2015 (73) November 2015 (58) October 2015 (64) September 2015 (81) August 2015 (60) July 2015 (60) June 2015 (52) May 2015 (43) April 2015 (59) March 2015 (57) February 2015 (62) January 2015 (96) December 2014 (22) November 2014 (69) October 2014 (133) September 2014 (144) August 2014 (38)